Uhlobo oluvame kakhulu nokutshalwa kwezimali emazweni amaningi emhlabeni wonke - kuyinto nje ebhange, ethiwa amagama idiphozi kwezomnotho. Lokhu kukhetha kungenxa ukuthuthukiswa ngokushesha futhi okusheshayo umnotho kanye nokutshalwa kwezimali. Kuyini idiphozi ebhange, futhi kungani idume kangaka? Ukutholakala ngokushesha futhi kalula le ndlela ka utshalomali, ukongiwa kanye nekusita izimali bakhangwa abayizakhamuzi ezejwayelekile. Kodwa bambalwa abantu ngempela nimphendule oluphelele yombuzo, kuyini idiphozi ebhange. Futhi ngesisekelo kokukwazi kwezomnotho.
Yini ubizwe ebhange?
Idiphozithi - lokhu ithunyelwa yasebhange kumaphesenti athile izimali. Ngemva kwenkathi ethile yesikhathi izimali kufanele ibuyiselwe. Kuyini idiphozi ebhange? Akukona imali nje. Vlad kungenzeka izibambiso, amaphrimiyamu, izinkokhelo, amatshe ayigugu, ngisho ingcebo. Ngisho ngaphandle kolwazi oluthile emnothweni kanye nokutshalwa kwezimali, kulula ukuthi aqaphe isimo emakethe ukuze siqaphele izici ezahlukene ezithinta isimo sezimali yesifunda. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi yonke into ilula: Kumelwe wenze lemali edingekayo ebhange ekhethiwe, futhi nje ulinde ukuhlangabezana nomnqamulajuqu iqoqe. Zimali, esikhathini esiningi, kudinga ukuzimisela amasevisi anikezwa kubo, okubandakanya inani lenzalo zinjalo. Kusho ukuthini? Le ndoda ufuna ukuba zifakwe ebhange inzuzo, okungukuthi, ngesikhathi esifanele ukuze uthole inani eligcwele, kufaka inzalo, esibonakala by inzuzo. Le ndoda ozihambela emigwaqeni akanandaba izinkinga zomnotho kanye izitayela. Yingakho imali ezidume ngakho nezihloniphekile.
Uma umuntu uhlela ukuxazulula zonke izinkinga zakho zezimali ngosizo umnikelo, kuyobe ulinde ukudumala. Ngokuyinhloko cishe njalo yasebhange inikeza lokuthenga ngesikweletu futhi inzalo kancane ngaphansi noma ilingane ezingeni emali. Kusho ukuthini? Uma unquma ukuvula idiphozi ebhange ke ulungele, ukuthi ukukhuphuka kwamanani ezimpahla "Uzodla" cishe yonke inzuzo. Ngokwemvelo, lokhu kusho ebhange kungaba ngokuphawulekayo ukubambezela yonke inqubo, kodwa ezintweni capital nokwengezwa idiphozi asihlobene. Kodwa ungalilahli ithemba imali kanye ukubukela phansi kubo. Iningi osomabhizinisi esidlule futhi kuphumelele nabatshalizimali ngandlela-thile ubambe ingxenye inhloko-dolobha yabo ngesimo ezifakwa emabhange. Kulokhu, ukukhetha okunjalo nje isuke ibangelwa Isu lokutshala izimali, okubandakanya izingozi okubhekiwe futhi cishe uyabuya. Njengoba yaziwa, ebhange - lena ngenye yezindlela ephephile imali.
Ngo kakhulu emazweni asethuthukile kukhona izinhlangano ezikhethekile kanye nezimali, okuyizinto guarantors we nenzuzo yokutjala kumakhasimende uma kwenzeka ukuhluleka ebhange. Lokhu isici okumelwe icatshangelwe zimali imfundamakhwela. Ngaphambi baphathe imali yakho endaweni ethile, kumelwe uqonde kahle ukuthi amabhange, ukutshalwa kwezimali, imali, babone izilinganiso of interest amafemu, ngijwayele ohlongozwayo nokulingana, lenzalo futhi ngokuya imali. Noma yiluphi ulwazi olwengeziwe kuyoba usizo kumiswa utshalomali portfolio ayo.
Kunezinhlobo ezimbili zama imali ebhange - elithi uphoqe imali. Ingqikithi lokhu ukuthi ukuze zikhiphe imali akhawunti kungaba cishe noma nini. Nokho, kukhona ethile ebalulekile njalo kwesimiso esinjalo - inani lenzalo sincane kakhulu. Yingakho lolu hlobo idiphozi esingathandeki futhi ezingenanzuzo.
Lolu hlobo utshalomali libhekene ukhokhe inzalo enkulu. Inzuzo kulokhu kuncike isikhathi okomnikelo kanye nenani. Inhlokodolobha atholakalayo ukuya ebhange, ayanda kuyoba iphesenti inzuzo. Kuyini idiphozi ebhange ihlandla esinqunyiwe futhi yiziphi nebubi? A ethile okuphawulekayo ukuthi ukuze zikhiphe imali nganoma isiphi isikhathi, awukwazi. Noma kungenzeka ukugcwala futhi isamba semali esidiphozitiwe. Kodwa ngokuya ukubekwa kukhona ububanzi kakhulu - kusuka izinsuku ezimbalwa emashumini. Ukuze ukuheha amakhasimende amabhange bayahamba ukuyekethisa. Iphuzu eliyinhloko ukuthi kuvunyelwe ukuthatha ethile yesibambiso, kodwa ubeke umkhawulo othile. Izinga lenzalo yemali mboleko zizohluka kwezabantu idiphozi igama, kodwa unekhono ashona.
Lwemali idiphozi ukubekwa
Namuhla, kulula ukuba afeze ethenge zezimali ezahlukene kakhulu emhlabeni. Nokho, kuwo wonke amazwe, imali ethandwa kakhulu lwemali kazwelonke, euro nedola laseMelika. Kwemali Foreign ezifakwa ngokuvamile eziphansi inzalo engako, futhi ngenxa yalokho, imali encane. Kuze kube manje, udumo ngaphezulu yazuza multicurrency imali. Basuke izimpawu ikhumbula for lwemali ngalunye ngokuhlukile. Ngokuvamile, imali enjalo akhiwa ngesisekelo idiphozi ebucayini - ikhumbula ibhalansi esincane futhi ikhono ashona. Isici Ukugunda kakhulu iyona ukuhunyushwa kolimi luyiswe lwemali ngesikhathi nokukala imali kwamanje emakethe interbank. Inzalo ezifakwa emabhange nge umsebenzi ofanayo ngokuvamile akhethiwe ngamunye yeklayenti ngayinye. Lokhu kwenza multi-okokufaka ethandwa phakathi kwabahwebi, broker wabenza ezimakethe exchange angaphandle.
Izinga lenzalo yemali mboleko ku ebhange
Ukuze ukwakheka iphothifoliyo utshalomali kuyadingeka ukuqonda imiqondo eyisisekelo. Zimbili izinhlobo zenzalo - elintantayo futhi isilungisiwe. Eyokuqala zingashintsha bedle nezikhungo zomphakathi zezimali, okuyinto lokulawula emakethe. Lokhu kwenzeka endabeni lokulandisa izici ezihlukahlukene - kokubili kwezomnotho nakwezombusazwe. Izinga fixed isethwe ngqo ngisho ngesikhathi ukusayinwa inkontileka ekuqaleni kwesikhathi futhi izohlala injalo sonke isikhathi kuze kube sekupheleni. Ngo elintantayo ibhange kumele aqinisekise ukuthi yini ukuthi imali okungenani, kodwa kuphela ukubikezela ezingeni imali cishe akunakwenzeka.
Kuyinto Kuyadingeka ukuba akhulume ngayo amazwi anjengokuthi "Ukwenza ofeleba". Kusho ukuthi izimali anikezwa, ngeke icabange Usayizi idiphozi plus inzalo etholakala ngokuba ingxenye ethile kwesikhathi. Kuyadingeka ukuba sicabange ukuthi singakwazi yini ofeleba nokuhlela utshalomali zabo zokusebenza kanye ukubala ematfuba inzuzo.
Corner thini: ubukghoni nokubhalelwa
Amandla ubuchwepheshe kahle